National Power News:: आफू करोडौंको पार्टी गर्ने अनि निर्माणाधिन माझी बस्तीको लागि सहयोग याचना ! National Power News:: आफू करोडौंको पार्टी गर्ने अनि निर्माणाधिन माझी बस्तीको लागि सहयोग याचना !
उनले धनगढीका युवा विजेयन्द्रसँग हालै विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुले काठमाडौंको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा भव्य विवाह गरेका थिए भने काठमाडौं र धनगढीमा पनि भव्य विहे भोजको आयोजना गरेका थिए । कोरोना कहरको बेला उनीहरुले करोडौं खर्च गरेर विवाह गरे । त्यतिवेला माझी बस्तीको लागि केही पनि सोचेनन् । अहिले बस्ती निर्माणमा रकम अभाव भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भने रोईरहेकी छिन् ।